သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ခင်ဗျား.. ~ ဒီမိုဝေယံ
ပေးပို့သူ Lungatay အားကျေးဇူးတင်ပါသည်...။
စာသားများအား ဘာသာပြန်ပေးပို့ပေးတဲ့ ကိုနစ်နေမန်းအားလည်း ကျေးဇူးတင်ပါသည်...
(Takeawalk with me)
ကျွန်တော်နဲ့အတူ လမ်းလျှောက်ထွက်ကြရအောင် ...
သမ္မတကြီးနဲ့ကျွန်တော် နှစ်ယောက်တည်း လမ်းလျှောက်ထွက်ကြတယ်လို့အောင်းမေ့ပြီး၊ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အကြား ဘာမှ ကွာခြားမှု မရှိဖူးလို့သဘောထားကြရအောင် …
ဒီလိုလမ်းအတူတူလျှောက်ရင်း ကျွန်တော် မေးချင်တာလေးတွေ မေးပါရစေ၊ ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးစလုံး ရိုးသားမှုအပေါ်အခြေခံပြီး ပြောကြရအောင် ..
အခုလမ်းလျှောက်ထွက်ရင်း လမ်းမှာ မြင်တွေ့ ရတဲ့ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်နေကြတဲ့သူတွေကို သမ္မတကြီး မြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာ ဘယ်လို ခံစားမိပါသလည်းဗျာ ...
သမ္မတကြီး ညဘက်မအိပ်ခင်မှာ ဘယ်သူတွေအတွက် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးတာ ရှိပါသလည်း ...
သမတကြီးအနေနဲ့ကြည့်မှန်ကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ ဘယ်လို စိတ်ထဲ ခံစားမိပါသလည်း၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အင်မတန် ဂုဏ်ယူဝန့် ကြွားနေပါသလာ ...
ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေ ငိုကြွေးနေရချိန်မှာ သမတကြီးအနေနဲ့ဘယ်လို နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်စက်ပါသလည်း ...
မိခင်ဖြစ်သူတွေက သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကို နှုတ်ဆက်ဖို့အခွင့်အရေး မရှိတဲ့အချိန်မှာ သမ္မတကြီးအနေနဲ့ဘယ်လိုများ စိတ်ထဲမှာ ခံစားကြည့်မိတာ ရှိပါသလည်း ...
သမ္မတကြီးအနေနဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ် ခေါင်းမတ်မတ်ထောင်ပြီး လျှောက်လှမ်းရဲပါသလည်း ...
Can you even look me in the eye? And tell me why?
အဲ့ဒီလိုမှာ သမတကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော့်ကို သေသေချာချာ ကြည့်ရဲပါသလား၊ ကြည့်ရဲတယ်ဆိုရင် ဘာလို့ သေသေချာချာ ကြည့်ရဲလည်းဆိုတာ ပြောပြပါလား ...
Dear Mr.President, were youalonely boy?
သမ္မတကြီးအနေနဲ့တစ်ဦးတည်း ရှိနေတယ်လို့ယူဆနေခဲ့ပါသလား ...
သမ္မတကြီးအနေနဲ့တစ်ဦးတည်း ရှိနေတယ်လို့ယူဆနေပါသလား ...
သမ္မတကြီးအနေနဲ့ဘယ်လိုများ ပြောနိုင်ပါသလည်း၊ သမ္မတကြီးရေ မျိုးဆက်သစ်ကလေးငယ်လေးတွေ မရှိတော့ဖူးများ ထင်နေပါသလား ...
ကျွန်တော်တို့တွေ ငထုံ ငအ ငနတွေ မဟုတ်ပါဖူး၊ ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေ မျက်မမြင်လို ကန်းနေကြသူတွေ မဟုတ်ပါဖူး ...
(We're not blind)
ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေ မျက်မမြင်လို ကန်းနေကြသူတွေ မဟုတ်ပါဖူး ...
သမ္မတကြီးအနေနဲ့ပြည်သူတွေအတွက် ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့ လမ်းကို ဖန်တီးနေချိန်မှာ
ဒီ မျိုးဆက်သစ်ကလေးငယ်လေးတွေဟာ သမတကြီးရဲ့တိုင်းပြည်အပေါ် အုပ်ချူပ်နေတဲ့ အခြေအနေအပေါ်မှာ မူတည် ရပ်တည်နေတာပါ၊
သွေးရင်းသားရင်း သမီးဖြစ်သူကို သင့်လျော်တဲ့လမ်း လျှောက်လှမ်းနေတယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုကြိုးစားဆောင်ရွက်ပေးမယ့် ဘယ်လို ဖခင်ကောင်းတစ်ဦးပါလည်း ...
သွေးရင်းသားရင်း သမီးဖြစ်သူ ရဲရင့်တဲ့ ယောင်္ကျားတစ်ဦးလိုမျိုး ဖြစ်နေခဲ့ရင် မုန်းတီးနေတတ်မယ့် ဖခင်ဟာ ဘယ်လို ဖခင်မျိုးလည်း ....
ကျွန်တော့်အနေနဲ့မြင်ကြည့်မိတာကတော့ ပြည်သူလူထုခေါင်းဆောင် အမျိုးသမီးဖြစ်သူကများ ဘာများပြောလိမ့်မလည်းဆိုတာကိုပါ ...
သမ္မတကြီးဟာ အရက်သေစာနဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲထားသူတစ်ဦးလို အင်မတန်ကို လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေမှုတွေနဲ့ဝေးကွာစွာ အသိမမြင်ဘဲ ရှိနေတဲ့သူလို့ဆိုတာပါဘဲ ...
ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေ ငိုကြွေးနေရချိန်မှာ သမ္မတကြီးအနေနဲ့နှစ်ခြိုက်စွာ ဘယ်လိုများ အိပ်ပျော်နေပါသလည်း ...
မိခင်ဖြစ်သူတွေက သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကို နှုတ်ဆက်ဖို့အခွင့်အရေး မရှိတဲ့အချိန်မှာ သမ္မတကြီးအနေနဲ့ ဘယ်လိုများ စိတ်ထဲမှာ ခံစားကြည့်မိတာ ရှိပါသလည်း ...
အဲ့ဒီလိုမှာ သမ္မတကြီးအနေနဲ့ ကျွန်တော့်ကို သေသေချာချာ ကြည့်ရဲပါသလား၊
မှန်ကန်သော အလုပ်ကြိုးစား ဆောင်ရွက်မှုအကြောင်း ပြောပြပါရစေ ...
အနာဂတ် မျိုးဆက်ကလေးတွေအတွက် လက်ရှိ မလိုအပ်တဲ့ ဖြုန်းတီးမှုတွေကို လျှော့ချပစ်ပါ ...
ပြိုကျပျက်ဆီးခဲ့မှုတွေကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ပါ ...
မှန်ကန်သော အလုပ်ကြိုးစားဆောင်ရွက်မှုအကြောင်း ပြောပြပါရစေ ...
လက်တွေ့ မကျတဲ့ ဖန်တီးမှုတွေကနေ ရုန်းထွက်ပြီး (ပြည်သူတွေအတွက်) လက်တွေ့အကျိူးပြုမယ့်ဟာတွေကို တည်ဆောက်ပါ ...
Let me tell you 'bout hard work, hard work, hard work
You don't know nothin' 'bout hard work, hard work, hard work
ဒါပေမယ့် မှန်မှန်ကန်ကန် အလုပ်ကြိုးစားဆောင်ရွက်မှုအကြောင်း သမတကြီး မသိဖူး ...
ဒါနဲ့များ သမ္မတကြီးအနေနဲ့ဘယ်လိုများ အိပ်ပျော်ပါလိမ့် ...
ဒါနဲ့များ သမ္မတကြီးအနေနဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ် ခေါင်းမတ်မတ်ထောင်ပြီး လျှောက်လှမ်းရဲပါသလည်း ...
Dear Mr. President, you'd never takeawalk with me, would you?
သမ္မတကြီးခင်ဗျာ .. အခုလို မေးမြန်းပြောဆိုမိလို့သမ္မတကြီး ကျွန်တော်နဲ့ အတူ လမ်းလျှောက်ပါဦးမလား
ရုပ်သံဖိုင် ဒေါင်းလုပ်လုပ်ချင်ရင် http://www.mediafire.com/?72t39n47x2x7oi5